ဇွန်, 1909 ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဟူသည့်စကားလုံးသည်လူ့ဇာတိကိုဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင့်လူ့ဇာတိခံခြင်းသည်လူ့ဇာတိအသွင်ဖြင့်ဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်လူ့ဇာတိကိုခံယူခြင်းဆိုသည်မှာလူ့ပုံသဏ္ဌာန်အရနတ်ဘုရားများပေါ်ပေါက်လာခြင်း၏တစ်ခုဖြစ်သည်၊ မည်သည့်အလားသဏ္peာန်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင့် ၀ င်စားခြင်းဟုခေါ်ဆိုကြသည့်ဘာသာတရားကြီးများအားလုံးတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင့်လူ့ဇာတိအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုဘာသာရေးအသစ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းကတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်၏အမည်မှဆင်းသက်လာခြင်းသို့မဟုတ်နောက်လိုက်နောက်လိုက်များကယင်း၏အမည်ကိုပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒosophနိကဗေဒအရဘုရားသခင်သည်စကြဝMindာစိတ် (သို့) နတ်ဘုရားသည်ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းနှင့်လူ့အားနည်းချက်များနှင့်အားနည်းချက်များထက် ကျော်လွန်၍ မြင့်မြတ်သောအသိဥာဏ်များစုပေါင်းနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမြင့်မြတ်သောအသိဥာဏ်များစုပေါင်းနေထိုင်ခြင်းကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လိုဂိုများဟုပြောကြသည်။ ပညတ်တရားအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောကာလ၌ဤမြင့်မြတ်သောအိမ်ရှင်သို့မဟုတ် Universal Mind (သို့) ဘုရားသခင်သည်လူသားတို့အားမသေခြင်းနှင့်ဘုရားသခင့်ထံသို့တိုးတက်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကူညီရန်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်လာသည့်အခါထိုအဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသူများ၏ဝေါဟာရများအရကယ်တင်ရှင်တစ် ဦး သည် Logos၊ Demiurgos၊ Universal Mind, Deity, Great Spirit သို့မဟုတ် God တို့၏နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သောအတွေးအခေါ်များစွာရှိသည်။ မြင့်မြတ်သောလူ့ဇာတိခံခြင်းဒီဂရီနှင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ခြင်း၏ဘုရားသခင့်လူ့ဇာတိနှင့်ဆိုင်သောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းသည်ဘုရားသခင့်အိမ်ရှင်သည်ဘုရားသခင့်အဆက်အသွယ်ကိုခိုင်လုံစေရန်လုံလောက်သောသန့်ရှင်း။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥာဏ်ရည်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးအရတိုးတက်လာသောသေတတ်သောလူသားနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ pituitary ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
ဇီဝကမ္မဗေဒအရ၊ pituitary body နှင့် ပတ်သက်၍ အမြင့်ဆုံးသောနားလည်မှုမှာ၎င်းသည် ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်၏အုပ်ချုပ်ရေးနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးနှစ်မျိုးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အနောက်ဘက်အမြှောက်သည်အာရုံခံအာရုံကြောများမှခန္ဓာကိုယ်၏ဆွဲဆောင်မှုအားလုံးကိုရရှိစေသည်၊ နောက်ဘက်အမြှေးသည်မော်တာအာရုံကြောများကိုထိန်းချုပ်ပြီးညွှန်ကြားသည့်အရာဖြစ်သည်။ ကြွက်သားနှလုံးသည်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်၏ဗဟိုဖြစ်သကဲ့သို့ pituitary ခန္ဓာကိုယ်သည်အာရုံကြောစနစ်၏နှလုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည်။ သွေးကြောများမှတစ်ဆင့်သွေးမှနှလုံးမှခန္ဓာကိုယ်တွင်းစီးဆင်းသွားပြီးသွေးပြန်ကြောများမှတစ်ဆင့်နှလုံးသို့ပြန်လာသည့်အခါအာရုံကြောအရည် (သို့) အီကတုပ်ကွေးခန္ဓာကိုယ်မှသွေးကြော မှနေ၍ မော်တာအာရုံကြောများမှဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်နှင့် နောက်ကျော pituitary ခန္ဓာကိုယ်မှအာရုံခံအာရုံကြောမှတဆင့်။ pituitary body သည် ဦး နှောက်၏အလယ်ဗဟိုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူသား Ego သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ ထိုဗဟိုအားဖြင့်လူသား Ego သည်နိုး၊ အိပ်မက်နှင့်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းဟုခေါ်သောပြည်နယ်များကိုဖြတ်သန်းသည်။ လူ့အတ္တသည် pituitary body သို့မဟုတ်အပေါ်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုပြုသည့်အခါလူသည်နိုးပြီးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိကမ္ဘာကိုသတိပြုမိသည်ဟုဆိုကြသည်။ Ego သည် pituitary body ကိုချက်ချင်းထိတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ခြင်းမှအနားယူသောအခါ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်မှအနားယူကာကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်မှထွက်လာသောကမ္ဘာ့သက်ရှိအင်အားစုများမှဖြစ်ပေါ်လာသောတင်းမာမှုကြောင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမရှိစေရန်ပြုလုပ်သည်။ နှင့် pituitary ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူစိတ်၏လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်။ စိတ်သို့မဟုတ် Ego သည် pituitary body အပေါ်ထိန်းချုပ်ထားခြင်းကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးအခြား ဦး နှောက်၏အခြားအလယ်ဗဟိုများတစ်လျှောက်တွင်အနားယူသွားသည်နှင့်သူတို့၏အလယ်အလတ်အခြေအနေများနှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှ
အဆိုပါ pineal ဂလင်းများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
အဆိုပါ pituitary ခန္ဓာကိုယ်နှင့် pineal ဂလင်းနှစ် ဦး စလုံးသည်လူ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအဆက်အသွယ်၏စင်တာများနေသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်ကြသည်။ pituitary body သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်သောအရာများတွင်လူ့စိတ်ကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုသောဗဟိုချက်ဖြစ်သော်လည်း pineal gland သည်လူ၏မြင့်မားသောနှင့်ပိုမိုမြင့်မြတ်သောတစ် ဦး ချင်းဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါ pituitary ခန္ဓာကိုယ်ဆင်ခြင်တုံတရားစှမျး၏လှုပ်ရှားမှုလိုအပ်လိုအပ်သော ratiocinative ဖြစ်စဉ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးများတွင်အသုံးပြုသည်။ အရာတစ်ခု၏တိုက်ရိုက်ဗဟုသုတရရန်ထင်းရူးဂလင်းကိုအသုံးပြုသည်။ pineal gland ဆိုသည်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မပါဘဲမိမိကိုယ်ကိုအထင်အရှားပြည့်စုံသောအသိပညာနှင့်ဥာဏ်ပညာကိုလူ့ဥာဏ်သို့ရောက်စေသည့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ pineal gland ဆိုသည်မှာ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနားလည်မှုနှင့်ဥာဏ်ပညာရှိသူအားသတိရှိရှိနှင့်အသိဥာဏ်ရှိစွာအသုံးပြုသောအင်္ဂါဖြစ်သည်။ ယင်းသည်ဝိညာဉ်ရေးတွင်ပညာရှိ၏။ သာမန်လူသားများအတွက် pituitary ကိုယ်ခန္ဓာကိုသူချက်ချင်းမသိဘဲသူထင်သကဲ့သို့သူ၏ထင်မြင်ချက်ကိုမသိဘဲအသုံးပြုသည်။ သာမန်လူတွင် pineal gland သည်လူသားများ၏အနာဂတ်ဘုရား၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုလက်ရှိသက်သေဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်သူသည်သင်္ချိုင်းဂူကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်စွာနေသည်။
အဆိုပါသရက်ရွက်၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
သရက်ရွက်သည်အာကာသသို့မဟုတ်ပုံစံခန္ဓာကိုယ်၏ဗဟိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သရက်ရွက်သည်အထူးသဖြင့်အစောပိုင်းအသက်တာတွင်လည်ပတ်နေစဉ်မော်လီကျူး၊ နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်နှင့်ရုပ်ဝတ္ထု၏ဆယ်လူလာဖွဲ့စည်းပုံအကြားဆက်နွယ်မှုကိုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သွေးလည်ပတ်မှုနှင့် Lymphatic system တို့နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်း၏အလေ့အထများကိုသတ်မှတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်၏ပုံစံကိုသေချာပေါက်ထူထောင်ပြီးနောက်သရက်ရွက်ကိုခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတိုင်းတွင်ထိုင်သောကြောင့်သရက်ရွက်ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
အဆိုပါသိုင်းရွိုက်ဂလင်းများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
သိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာရှိအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုသိမ်းယူမည့်သူသည်မမွေးဖွားမီပြုမူသည့်အရာ၏ဗဟိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် pituitary body နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်၏အရိုးဖွဲ့စည်းပုံအတွက်လိုအပ်သောအချို့သောဓာတုပစ္စည်းများမှလွတ်မြောက်စေသည့်ရေလှောင်ကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားသည့်ဘက်ထရီတစ်ခုဖြစ်ပြီးသွေးအပေါ်သက်ရောက်သည့် tincture ကိုလည်းရရှိထားသည်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည်စိတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပြုမူသောအင်္ဂါဖြစ်သည်။ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း၊ pituitary body နှင့် pineal gland အားလုံးသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရိုးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စိတ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤဂလင်းများထိရောက်သောအခါ၎င်းသည်စိတ်၏ပုံမှန်လုပ်ရပ်ကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ကာများသောအားဖြင့်သေခြင်းတရားကိုဖြစ်စေသည်။ စိတ်ထဲတွင်ယာယီထူးခြားမှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်စိတ်ကိုဖြစ်စေသည်။